Ny zezika simika dia novokarina tamina syntetika avy amin'ny akora tsy simika, dia singa manome otrikaina mahavelona ho an'ny fitomboan'ny zava-maniry amin'ny fomba ara-batana na simika.
Ireo zavatra mahavelona amin'ny zezika simika
Ny zezika simika dia manankarena amin'ireo otrikaina ilaina telo ilaina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry. Ny karazana zezika dia misy karazany maro. Ny ohatra sasany amin'ny zezika simika dia ny sulphate amonium, phosfat amonium, nitrate amonium, urea, klôroida amoniôma sns.
Inona ny zezika NPK?
☆ Zezika azota
Ny fakan'ny zavamaniry dia afaka mandray zezika azota. Ny nitroka no singa lehibe indrindra amin'ny proteinina (ao anatin'izany ny anzima sy coenzyme), ny asidra niokleika ary ny phosfolipid. Izy ireo dia ampahany manan-danja amin'ny protoplasm, nucleus ary biofilm, izay manana andraikitra manokana amin'ny hetsiky ny zavamaniry. Ny nitroka dia singa iray ao amin'ny chlorophyll, noho izany dia misy fifandraisana akaiky amin'ny fotosintesis. Ny habetsaky ny azota dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fizarana sela sy ny fitomboana. Noho izany dia ilaina be ny fanomezana zezika azota. Urea, amoniôma amoniôma ary amoniôma sulfate dia matetika ampiasaina amin'ny fambolena.
☆ Zezika phosphatic
Ny phosforus dia afaka mampiroborobo ny fivoaran'ny faka, voninkazo, voa ary voankazo. Ny phosphore dia mandray anjara amin'ny fizotran'ny metabolika isan-karazany. Ny phosphore dia manan-karena amin'ny meristem, izay manana hetsika fiainana mamokatra indrindra. Noho izany, ny fampiharana zezika P dia misy fiatraikany tsara amin'ny fambolena, ny sampana ary ny fotony. Ny phosforus dia mampiroborobo ny fiovam-po sy ny fitaterana gliosida, ahafahan'ny fitomboan'ny masomboly, ny fakany ary ny tubers. Izy io dia afaka mampitombo be ny vokatra.
☆ Zezika potasy
Ny zezika potassic dia ampiasaina amin'ny fanafainganana ny fitomboan'ny taho, ny fivezivezin'ny rano ary ny fampiroboroboana ny voninkazo sy ny voankazo. Ny potasioma (K) dia amin'ny endrika ion amin'ny zavamaniry, izay mifantoka amin'ny ampahany mamokatra indrindra amin'ny fiainan'ny zavamaniry, toy ny teboka maniry, cambium ary ravina, sns. mandray rano.
Tombony azo avy amin'ny zezika simika
Zezika simika manampy ny zavamaniry maniry
Izy ireo dia mirakitra iray na maromaro amin'ireo otrikaina fitomboana tena ilaina toy ny azota, phosforus, ary potasioma ary ny maro hafa. Raha vao ampiana amin'ny tany, ireo otrikaina ireo dia manatanteraka ny fitakiana takiana amin'ireo zavamaniry ary manome azy ireo ireo otrikaina tsy ampy azy ireo na manampy azy ireo hitazona ireo otrikaina very. Ny zezika simika dia manome famolavolana manokana an'ny NPK mba hikarakarana ny tany sy zavamaniry tsy ampy otrikaina.
Zezika simika mora vidy kokoa noho ny zezika biolojika
Ny zezika simika dia mitaky vola kely noho ny zezika biolojika. Amin'ny lafiny iray, mahita amin'ny fizotry ny famokarana zezika biolojika. Tsy sarotra ny mamantatra ny antony mahalafo ny zezika biolojika: ny filàna fiotazana akora biolojika hampiasaina amin'ny zezika, ary ny fiakaran'ny vidin'ny biolojika voamarin'ny masoivohon'ny governemanta.
Etsy ankilany, ny zezika simika lasa mora vidy dia satria fonosina betsaka kokoa isaky ny lanja no lanin'izy ireo, ary zezika biolojika kosa no ilaina amin'ny ambaratonga otrikaina mitovy. Ny iray dia mila zezika biolojika maro kilao mba hanomezana haavon'ny otrikaina an'ny tany izay omen'ny zezika simika iray kilao. Ireo antony 2 ireo dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fampiasana zezika simika sy zezika organika. Ny tatitra sasany dia milaza fa ny tsenan'ny Zezika amerikana dia manodidina ny $ 40 Miliara ka ny zezika biolojika dia manodidina ny $ 60 tapitrisa fotsiny. Ny ambiny dia anjaran'ny zezika artifisialy isan-karazany.
Manome sakafo avy hatrany
Ny fanomezana sakafo ara-tsakafo eo noho eo sy ny vidin'ny fividianana vidin-tany dia nampalaza be ny zezika tsy organika. Ny zezika simika dia lasa foto-tsakafon'ny toeram-pambolena sy tokontany ary zaridaina maro ary mety ho singa lehibe amin'ny fahazaran-dratsy fikarakarana bozaka. Saingy, tsy manimba ny tany sy ny zavamaniry ve ny zezika simika? Tsy misy zavatra mila tsikaritra ve amin'ny fampiharana zezika simika? TSIA ny valiny!
Vokatry ny tontolo iainana amin'ny fampiasana zezika synthetic
Fandotoana amin'ny loharanon'ny rano ambanin'ny tany
Ny sasany amin'ireo fitambarana syntetika ampiasaina hanamboarana zezika simika dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana raha avela hidina amin'ny loharano. Ny azota izay mikoriana amin'ny rano ambonin'ny tanimboly dia mitaky 51% amin'ny hetsiky ny olombelona. Ny azota amoniaka sy ny azota no tena mandoto ny renirano sy ny farihy, izay mitarika eutrofikasi sy loto anaty rano.
Manimba ny firafitry ny tany
● Amin'ny fampiasana zezika simika mandritra ny fotoana maharitra sy lehibe, dia hiseho ny olana ara-tontolo iainana sasany, toy ny fanamorana ny tany sy ny crust. Noho ny fampiasana zezika azota marobe, fa tsy zezika biolojika, ny tanimboly tropikaly sasany dia ao anaty vovon-tany mafy, ka nanjary very ny fambolena. Ny vokatry ny zezika simika amin'ny tany dia lehibe ary tsy azo ovaina.
● Ny fampiasana zezika simika maharitra dia afaka manova ny tany pH, manimba ny tontolo iainana mikraoba, mampitombo ny bibikely ary manampy amin'ny famoahana entona entona.
● Karazan-javamaniry tsy miharo maro no asidra be, izay matetika mampitombo ny asidra ny tany, amin'izay mampihena ny zavamananaina mahasoa sy ny fitomboan'ny zavamaniry. Amin'ny alàlan'ny fanakorontanana ity tontolo voajanahary voajanahary ity, ny fampiasana maharitra zezika synthetic dia mety hitarika tsy fifandanjana simika amin'ireo zavamaniry mpandray.
● Ny fangatahana miverimberina dia mety miteraka fananganana poizina simika toy ny arsenika, cadmium, ary uranium amin'ny tany. Ireo akora simika misy poizina ireo dia afaka miditra amin'ny voankazo sy legioma anao amin'ny farany.
Ny fananana fahalalana antonony momba ny fampiharana zezika dia afaka misoroka ny fako tsy ilaina amin'ny fividianana zezika ary mampitombo ny vokatra azo.
Mifidy zezika arakaraka ny toetran'ny tany
Alohan'ny hividianana zezika dia ilaina ny mailo tsara amin'ny pH tany. Raha ritra ny tany, dia azontsika atao ny mampitombo ny fampiasana zezika biolojika, mitazona ny fifehezana ny azota ary mijanona ho toy ny zezika fosika.
Fiaraha-miasa amin'ny zezika biolojika
Io no votoatin'ny fampiasana fambolena zezika biolojika ary zezika simika. Ny fanadihadiana dia naneho fa mahasoa ny fihodinan'ny akora biolojika amin'ny tany. Miaraka amin'ny fampiasana zezika biolojika sy zezika simika, manavao ny akora biolojika amin'ny tany ary mihatsara ny fifanakalozam-bika amin'ny tany, izay manampy amin'ny fanatsarana ny asan'ny anzima amin'ny tany ary mampitombo ny fitrohana ny otrikaina. Manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra izany, manatsara ny atin'ny proteinina, ny asidra amine ary ny otrikaina hafa ary mampihena ny atin'ny nitrate sy ny nitrite amin'ny legioma sy voankazo.
Misafidy ny fomba zezika mety
Amin'ny teknikan'ny zezika sy ny tontolo iainana, ny atin'ny nitrate ny legioma sy ny voly ary ny karazana azota amin'ny tany dia mifandray akaiky. ny fatran'ny azota ambony kokoa amin'ny tany, ny atin'ny nitrate avo kokoa amin'ny legioma, indrindra amin'ny vanim-potoana farany. Noho izany, ny fampiharana zezika simika dia tokony ho aloha fa tsy be loatra. Ny zezika nitroka dia tsy mety amin'ny fanaparitahana, raha tsy izany dia miteraka volatilization na fatiantoka. Noho ny fihenan'ny fivezivezena, ny zezika phosphatic dia tokony hapetraka lalina.
Ny zezika simika dia mankasitraka ny zavamaniry maniry, ary misy akony lehibe amin'ny tontolo iainana.
Ahiana ny fandotoana ny rano anaty sy ny olana ara-tontolo iainana ateraky ny zezika simika. Hamarino tsara fa azonao tsara izay tena mitranga amin'ny tany eo ambanin'ny tongotrao, amin'izay ianao hanao ny safidinao amin'ny fahatsiarovan-tena.
Ny fitsipiky ny fampiasana zezika simika
Ahena ny habetsaky ny zezika simika apetraka ary atambatra amin'ny zezika organika. Manaova Diagnostia momba ny sakafo arakaraky ny fepetra eto an-toerana ary asio zezika arakaraka ny tena filàna.